Qaadashada Isticmaalaha Deegaanka iyo Jirka-ku-saleysan | Martech Zone
Ansixinta Isticmaalaha Deegaanka iyo Ku-saleysan Jirka
Jimco, Nofeembar 11, 2011 Jimco, Nofeembar 11, 2011 Douglas Karr
Qaar ka mid ah stats qurux badan oo la yaab leh oo ku saabsan korsashada Adeegyada Geosocial iyo Goob-ku-saleysan (LBS) iyada oo loo marayo aaladaha moobaylka ayaa lagu muujiyay macluumaadkan ka socda Flowtown - Codsiga Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada. Ka weyn 58% dadka isticmaala taleefannada casriga ah isticmaalaya adeegyadan. Xogta macluumaadka waxay qeexaysaa mid kasta oo ka mid ah adeegyada sida:
Isgaarsiinta Juqraafiyeed - isku xirka bulshada ee noocan ahi wuxuu adeegsadaa adeegyada juqraafiyeed iyo awoodaha, sida geokoding iyo geotagging, si uu awood ugu yeesho dhaqdhaqaaqa bulshada oo dheeri ah.
Adeegyada Goobta Ku-saleysan - noocan ah macluumaadka ama adeegga madadaalada ayaa adeegsanaya barta juqraafiyeed ee aaladda moobiilka iyadoo loo marayo shabakad.
Tags: dhul ahaanNalalkaadeegyada ku saleysan goobtagoobta ku saleysanSuuqgeynta Mobilada iyo Mashiinkatelefoonka gacantasmartphone
Muhiimadda Mawduuca Cusub ee SEO